‘सरकारी सुविधा लिनेबाहेक सबै नेपाली दुःखी छन्’ – Nepali Digital Newspaper
‘सरकारी सुविधा लिनेबाहेक सबै नेपाली दुःखी छन्’
■ शशि पौडेल (उद्यमी)
घटना र विचार, न्युज डेस्क !2months ago March 12, 2020
नेता या स्वनामधारी विश्लेषकले झैँ केवल गफै मात्र चुटेर जीवन बिताउँदै गरेका भए यतिबेला शशि पौडेलको चर्चा घर–घरमा भइरहन सक्थ्यो । उनी लेख्न र बोल्न राम्रोसँग सक्छन्, कुनै समय शिक्षण र पत्रकारितामा पनि संलग्न उनी अहिले आफूलाई किसान भन्न रुचाउँछन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कमर्शमा स्नातक शशि अहिले लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरका मालिक हुन् र उनले पाँच सयभन्दा बढी गाई पालेका छन् । शशिको गाईफार्ममा प्रतिदिन दुई हजारदेखि बाइस सय लिटर दूध उत्पादन हुने गर्दछ । उनै शशिले युरो स्टार गु्रपको नाममा पास्ता र कर्नफ्लेक्स उत्पादन गर्ने कारखानामा पनि लगानी गरेका छन्, जनता टेलिभिजनका ‘प्रमोटर’मध्ये शशि एक हुन् । वि.सं. ०२४ असोजमा पर्वतको कुर्घामा जन्मिएका शशि पौडेल विद्यार्थीकालमा राजनीतितिर पनि आकर्षित भएका थिए । राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि शशि राम्रोसँग राजनीति बुझ्छन् र कम्तीमा नेताहरूले भन्दा राम्ररी देश बुझेका छन् । भन्छन्– देशको अवस्था यस्तै रह्यो भने हामी असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुनेछौँ ।
० तपाईं विद्यार्थीकालमा राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो, अहिले पूर्ण रूपले उद्यम–व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । राजनीति र उद्यमशीलताबीचको अन्तर कसरी महसूस गर्नुभएको छ ?
– अहिले राजनीति बेरोजगारहरूको कामजस्तो भएको छ । जबसम्म रोजगारहरूको हातमा राजनीति आउँदैन, तबसम्म राजनीतिले देशलाई कुनै योगदान पुऱ्याउन सक्ने म ठान्दिनँ । राजनीतिकर्मीहरू उद्यमी–व्यवसायीहरूसँग सहयोगचाहिँ लिइरहन्छन्, तर कुनै बेला उद्यमी–व्यवसायीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवसर आउन लाग्यो भने गैरराजनीतिक व्यक्ति भन्दै पन्छाउने गरिन्छ । रोजगारहरू राजनीतिमा नलाग्ने या लाग्न खोजे पनि अवसर नमिल्ने भएकोले अहिलेको राजनीति बेरोजगारहरूको रोजगारीजस्तो मात्र भएको छ । राजनीति आफैँमा रोजगारी नभई सेवा हो, तर यहाँ शिक्षक, वकिल, व्यापारी, उद्यमी आदिलाई पेसागत व्यवसायी भनेर बुझिएझैँ राजनीतिलाई पनि एउटा पेसाका रूपमा बुझ्न मिल्ने स्थिति छ ।
० देश अघि बढाउने कुरा सधैँ हुन्छन् र सबै राजनीतिकर्मी जो सत्तामा पुगेका हुन्छन्, तिनले देश अघि बढिरहेको दाबी गर्छन्, तर देश झन्झन् पछि परेको अनुभूति हुँदै छ, किन यस्तो भएको होला ?
– बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र पसेपछि दृष्टिभ्रम हुने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । देश बनाउने काम शुरु भएकै छैन, शुरु नै नभएको काम सम्पन्न हुने आशा गर्नुहुँदैन । सिंहदरबारमा बस्नेहरूका दाबी हास्यास्पद छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सडकको अवस्थाले नै देशको वास्तविक तस्बिर झल्काउँछ । कसैले सञ्चारमाध्यम या सभामा दाबी गरेजस्तो अवस्था देशमा छैन । नभएको कुरा भन्ने गरेकैले राजनीतिकर्मी र राजनीतिप्रतिको विश्वास र भरोसामा व्यापक ह्रास आएको छ ।
० नेपालमा सबैभन्दा धेरै आशा राखिएका पार्टी र नेताको सत्ता यतिबेला छ, कार्यपरिणामका आधारमा तपाईं कम्युनिस्ट सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
– सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजस्ता नेता न हिजो थिए, न भोलि चाँडै नै मिल्न सक्ला । तर उहाँलाई भुत्ते बनाइएको छ । राज्य कोषबाट मासिक तलब–भत्ता बुझ्नेबाहेक सबै नागरिक पीडित र दुःखी छन् । केपीजस्ता नेतालाई समेत दिग्भ्रमित बनाइएको छ । केपीमा केही गर्ने क्षमता र अठोट अहिले पनि छ, तर गलत प्रवृत्ति र पात्रको घेराबन्दीले उहाँको क्षमता सदुपयोग गर्न दिइरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेकाहरूमध्ये बालुवाटारभित्र प्रधानमन्त्रीको भलो चाहने असली हितैषीचाहिँ राजेश बज्राचार्य मात्र भएको महसूस मैले गरेको छु । तर उनीभन्दा अरूहरू नै हावी भएको पाउँछु । गलत घेराबाट मुक्त हुन सक्नुभएमा बाँकी तीन वर्षको कार्यकाललाई उच्चतम सदुपयोग गर्न उहाँ सफल हुनुहुनेछ ।
० आर्थिक दृष्टिले नेपाल पछिल्लो समयमा निकै माथि उठ्दै गरेको दाबी वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट भइरहेको छ, तपाईं यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
– म पटक्कै सहमत छैन । बाहिर छरिएर रहेको कुरा एउटा भाँडोमा सङ्कलन गरेर प्रगति भएको देखाउनु एउटा कुरा हो । न बाह्य र आन्तरिक लगानी बढेको छ, न लगानीमैत्री वातावरण नै छ । मानिसमा काम गर्ने उत्साह र वातावरण छैन । उत्पादन ह्रासोन्मुख छ । कागजमा के–के भयो म जान्दिनँ, यहाँ समाजमा र जनजीवनमा देखिने कुनै पनि प्रगति छैन । जनतामा छ त निराशा छ । सिंहदरबारभित्र बस्नेहरूको आर्थिक वृद्धि होला, अरूको छैन ।
० नेपालमा उद्यमी–व्यवसायीहरूका निम्ति यो समय कत्तिको अनुकूल हो ?
– उद्यमी–व्यवसायीका निम्ति सबैभन्दा कष्टकर समय यो हो । माओवादीको हिंसाकालमा पनि उद्यमी–व्यवसायीले यति ठूलो प्रताडना व्यहोर्नुपरेको थिएन । मैले भनेको कुरालाई मात्र आधार नबनाउनुहोस्, यो देशमा काम गरिखान खोज्ने हरेकलाई सोध्नुहोस्, मलाई लाग्छ यो समयमा राम्रो कसैले पनि भन्ने छैन ।
० त्यसो भए उद्यमी–व्यवसायीहरूले अहिले भोग्नुपरिरहेको समस्या के–के हुन् त ?
– उद्यमी–व्यवसायी भन्नेबित्तिकै तिनको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था, ब्याज, बजार र करसँग जोडिएको हुन्छ । यी सबै पक्ष प्रतिकूल छ अहिले । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने निजी क्षेत्र धराशायी हुन्छ । निजी क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु हो र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएपछि राष्ट्र पूर्ण रूपले असफल हुनेछ । बैंकहरूबाट ऋण लिने प्रक्रिया जटिल बनाइएको छ र क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । करको दर र दायरा बढाइएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्षय हुँदै गएको छ । त्यसैले अहिले कुनै पनि उद्यमी–व्यवसायीले सर्वत्र समस्याबाहेक अरू केही भोग्नुपरेकै छैन ।
० के अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै नीति–निर्णयका कारण देश अधोगतिमा गएको हो त ?
– मान्छेलाई काम गर्ने वातावरण नभएकोचाहिँ उहाँकै कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँको इमानदारी र लगनशीलतामा कतै शङ्का छैन । तर, बिरुवा लगाउने, हुर्काउने, बढाउने र फल लगाउनेपट्टि उहाँको ध्यान ठ्याम्मै पुगिरहेको छैन । फल लागिसकेको रूखबाट टिपनटापन गर्ने काममा उहाँ सफल, बिरुवा लगाउनेदेखि फल लाग्ने अवस्थासम्म पुऱ्याउनेतिर उहाँको दृष्टि पुगेको छैन र त्यतातिर उहाँको रुचि भएजस्तो पनि लाग्दैन ।
० यस्ता व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइराख्नुपर्ने कारणचाहिँ के होला, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
– म एउटा किसान/गोठालोले त्यति ठूलो विषयमा धारणा प्रकट गर्नु उचित होइन । तर, युवराज खतिवडाजी जुन लगन र योजनाका साथ लागिपर्नुभएको छ त्यसले देशको उन्नति–प्रगतिमा अवरोध पैदा गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले परिणाम र उद्देश्यमाथि विचार गर्न सक्नुपर्छ । केपी ओलीजस्ता नेतासमेत गुमराहमा पर्नु देशको भविष्यका निम्ति सुखद होइन ।
० नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ?
– जसले जे काम गर्न चाहेको छ त्यो काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपऱ्यो । लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्नुपऱ्यो । यही प्रकारको झन्झट जीवित राखेर केही गर्न सकिँदैन । राज्यले कानुनी र प्रशासनिक वातावरण बनाउन सकेको छैन । लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम यहाँ भइरहेको छ । आज कोही पनि मानिस कुनै व्यवसाय गर्न नचाहने र गरेकाहरू छोडेर भाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदै छन् । त्यसो हुनुको मूल कारण अहिले अवलम्बन गरिएको अर्थनीति र मन्त्रीको कार्य–व्यवहार नै हो । व्यवसायीसँग पाता कसेर कर उठाउनुलाई नै सफलता ठान्ने, कमाउने वातावरण बनाउन नसक्ने मान्छे नीति–निर्माण तहमा रहेसम्म केही हुने म देख्दिनँ ।